Indlu entle kaMakhulu-Câlin
Molweni nonke kwaye namkelekile ePouilly-en-Auxois!
Ungeza ngoku uze ufumane indlu kaMamie-Câlin kunye nomtsalane wayo logama nje ufuna, kwaye okoko ufuna...
Eyona ndlela ilula kukubhukisha NGOKU!
Ngenxa yokuzimisela kunye nomsebenzi wentsapho yonke, ngoku ungadla, uphumle kwaye uphumle kulo mmandla mhle waseBurgundy.
Fumana ukuba kutheni apha....
Le ndlu yabasebenzi yomzi-mveliso wangaphambili weethayile wasePouilly-en-Auxois iya kukwamkela kwigumbi layo lokuhlala elikhulu elivuleleke ekhitshini. Iindonga zayo zamatye amadala ziyakuhlebela amabali kunye neentsomi zikaMorvan kunye ne-Auxois.
Umgangatho ophezulu, igumbi lokulala elithandekayo elinombono welizwe elijikelezileyo kunye neenkomo ezingabamelwane ziya kukuzisela ukuphumla kunye nokuzola.
Elinye, igumbi lokulala elikhulu, kwisitayile esihle somoya wolwandle, liya kuvuyisa abancinci nabadala. Yenziwe ngeebhedi ezimbini ezizimeleyo kunye nebhedi yesofa yabantwana (amathuba okongeza oomatrasi ababini abatofotofo kakhulu). Jonga hayi elwandle, kodwa ngenkulungwane ye-13 Chapelle Notre-Dame oubliee.
Igumbi lokuhlambela liya kukunika ishawa ebanzi kunye nomthamo omhle wokunyamekela abancinci.
Unokusebenzisa ngokupheleleyo ikhitshi kunye nezitovu zayo ukonwabela abahlobo bakho kunye / okanye usapho lwakho kule ndawo inobuhlobo kunye nelali. Ukonwabela wonke umntu, i-dishwasher, i-microwave, i-oveni, isitovu, ifriji enkulu kunye nesikhenkcezisi zisesandleni sakho.
Indawo yokuhlala yesibini edibeneyo kunye nekhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese kunye ne-mezzanine inokuhlala abantu aba-5 (ibhedi ephindwe kabini kunye ne-futon yomntu omnye kwi-mezzanine kunye nebhedi ephindwe kabini ebuyiselwayo kumgangatho ophantsi).
Isitudiyo esifikelelekayo ngaphandle singathatha abantu abathathu: ibhedi ephindwe kabini yababini kunye nebhedi yesofa yomntu omnye (umatrasi okhululekileyo njengakwibhedi eyodwa. Inegumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye nekhitshi.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1130